Difaacaha Xuquuqda Aadaha oo Diakonia kala qaybgalay 25Sano-guuradii markii ay Soomaaliya ka shaqo bilawday. – Ophrd
26th February 2019 Articles, FeaturesEditor
Xafiiska difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland ayaa ka qaybgalay xuska 25sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gudaha Soomaaliya gaar ahaan Puntland ka hawl bilawday hay’ada Diakonia.
Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Maxamed Yusuf Cali ayaa u hambalyeeyay hay’adda iyo hawlaha ay ka qabatay dalka. Wuxuu sheegay in ay si dhow u taageereen xaalada horumarinta iyo dhawrista xuquuqda Aadanaha isla markaasna ula shaqeeyeen xafiiska.
Wuxuu u jeediyay Diakonia in ay sii balaariso hawlaha ay ka waddo Puntland
Xafiiska ayaa munaasabada ku soo bandhigay saddexdii warbixinood ee uu soo saaray, qorshaha iyo istaraatiijiyadda xafiiska iyo buugta baro xuquuqda Aadaninimo, maaraynta khilaafaadka, u qareemiidda xuquuqda Aadanaha iyo hagaha korjoogtaynta xuquuqda Aadanaha.
← Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland oo baarlamanka u jeediyay warbixin sannadeedka saddexaad – Sawirro	Xafiiska Difaacaha oo qabtay shirka saggaalaad ee daneeyayaasha Xuquuqda Aadanaha – Sawirro →